Dalka Qadar oo markii ugu horreysay taariikhda doorasho ka dhaceysa iyo qoyska amiir Tamim oo 154 sano dalkaasi xukumayay : Calanka.com
Dalka Qadar oo markii ugu horreysay taariikhda doorasho ka dhaceysa iyo qoyska amiir Tamim oo 154 sano dalkaasi xukumayay
Dalka Qadar ayaa ka mid noqonaya dalalka ugu dambeeya ee khaliijka kuwaas oo irdaha u furaya nidaamka doorashada kadib 154 sano oo qoyska amiirka hadda haysta ee Tamim bin Hamad Al Thani ay xukumayeen dalkaasi.
Doorashada loo furay dalkaasi ayaa ah midda “baarlammaanka” oo shacabku ay dooranayaan cidda mataleysa, waxaana qoyska reer boqor ee dalkaasi oo xukunka soo hayay tan iyo sannadkii 1867 ay xor u yihiin in ay iyagu soo xushaan ra`iisal wasaaraha iyo golaha wasiirrada dalkaasi.
Isbuuc ka hor ayuu ololaha doorashada ka bilowday dalkaasi, waxaana ka mid ah musharraxiinta baarlammaanka 28 dumar ah.
Tan iyo sannadkii 2003 ayaa la hadal hayay in dalkaasi loo fur-furayo nidaamka doorashada, balse waxa ay qaadatay 18 sano.
Xubnaha baarlammaanka la dooranayo ayaa la xadiday waxyaabaha ay ka doodi karaan iyo qodobada ay miiska soo saarayaan, waxaana ay ka doodi karaan oo ay cod u qaadi karaan oo kaliya arrimaha khuseeya siyaasadda xukuumadda iyo ra`iisal wasaaraha.
Doodaha xaarlammaanka ayaa fulaya oo keliya marka ay isku raacaan saddex-meelood xubnaha baarlammaanka.
Cid walba ma codeyn karto:
Dalka Qadar, waxaa ku nool dad gaaraya 2.8 milyan oo ruux, 300.000 ka mid ah dadkaasi ayaa muwaadiniin ama dhalad ah, waana dadkaasi intooda qaan-gaarka ah dadka codeynaya.
2.5 milyan-ka kale waa dad ajaanib ah oo u badan shaqaale dibedda laga keenay.
Dadka haysta dhalashada dalkaasi, balse aan asal ahaan kasoo jeedin dalka ayaa la saaray xannibaado dhanka doorashada ah, waxaana codeyn kara oo kaliya dadka dalkaasi ku noolaa laga soo bilaabo sannadka 1930-ka.